I am going back my previous thinking.
Some feeling are changed and some are still same.
ဒါကြောင့် မနက် ငါးနာရီမှ အိပ်ရတာကိုး..... :S
:S U U Thant, aunty Thant ရယ်...။
2008 က ကဗျာ တင်ဖို့ မနက် ငါးနာရီမှ အိပ်စရာလား...။ take glass ဟွန့်....။
ငါက သေချင်တဲ့ ကျားမို့ တောပြောင်းလာသလားလို့ .. :-|
ဒါကြောင့်လည်း ခုချိန်ထိ ရွက်မလွှင့်ဖြစ်သေးဘူး
ကြယ်တွေကို ဆွတ်ခူးဖို့လည်း ခုချိန်ထိ အင်အားမပြည့်ဝသေးဘူးဖြစ်နေတယ်